U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 32aad - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 32aad
U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 32aad
September 17, 2018 admin855
Yuusuf dareen xoogan baa hareeyay. Naxdin laguma sheegi karo, cabsi uma eka, xanaaqna raad kuma leh.
Qolkii buu albaabkii usoo xiray. Misana sidii in uu caruur yar ciyaarsiinayo dhaqso u furay. Weli waa fadhisaa. Waa Muno oonan biyo is marin. Si uu yeelo buu garan waayay.
Muno, iyadu Yuusuf markii labaad uu albaabka furay bay damacday in ay habsiiso, laakiin amakaagga wajigiisa ka muuqda awgiis bay halkeedii isaga nagaaday oo “Yuusuf waa aniga, maxaa ku helay” ku celcelisay.
Yuusuf in uu riyoonayo buu markaan aaminsanyahay, maxaa yeelay, sabab ay Muno Malaysiya u timaado ma garanayo.
“Malaha dabayshii baa madaxa kugu dhufatay, oo wax aanan jirin ku tusinaysa” buu isu sheegay.
Mar uu cabaar isagoo afku kala tagay Muno eegayo, buu inta mar labaad albaabkii usoo xiray Adeer Cali qolkiisii isku sii daayay.
Adeer Cali oo malaha dhawaaqa roobku hurdisiiyay, oo markaan si qotodheer u gama’san buu u galay. Inta nalkii u damiyay, oo buug korkiisa isagoo kala balaqan saarnaa isugu laabay oo koobadiinka u saaray, kushiinkii iska aaday. Wuxuu is leeyahay bal adeer Cali waadba kicin doontaahe, galaas biyo ah soo cab oo wax yar nafis, laga yaabee in miirku kuusoo laabtee.
Biyihii buu soo cabay, oo is yiri qolkaagii ku laabo. Uu is yiri kala jiireyba Munaa kasoo hor baxday oo kushiinka kasoo raadisay.
“Yuusuf aboowe fadhiga imoow, maxaa kugu dhacay ood usoo carartay?”
bay weydiisay. Iyadu waxay is leedahay malaha weli wuu kuu xanaaqsanyahay, laakiin isagu waaba aamini weysanyahay in ay Malaysiyaba la joogto.
Yuusuf wareerkii iyo walaacii uu adeerkiis Cali Muqdisho kusoo ilowsiiyay, Malaysiyana ay ka dhaqday oo daad ah baa hal mar ooda kusoo jabsaday. Dhibaatoo dhan baa hortiisa timid.
“Alla midaan maa madaxayga ka baxdo!” buu la qayliyay sidii in aysanba ag joogin.
Muno markay aragtay in uu aad u tartarsanyahay bay hadalkii ka yaraysay, oo fadhiga inta iska tagtay, buug miiska saarnaa isaga madadaalatay. Haddii ay dareensantahay xaalku halka uu ka marayo albaabka bay ka degi lahayd, ee waxay is leedahay, ha qaboobee sug, ama Cali baa markuu soo tooso idin soo dhex geli doona.
Muno joogisteeda Malaysiya, run iyo been waxay tahayba, in uu la hadlo ma doonayo. Mukusheedii buu fadhiga uga jeeday isagoo kushiinkii uu kaga dhuuntay kasoo baxaya. Waa la tira badatay, oo qolkuu galaba ula ekaatay in ay dhex fadhiso. Gurigii baa aad ula yaraaday. Inta adkaysan waayay buu Adeer Cali hurdadii kasoo jafay. “Adeeroow macaanoow kaalay mashaqadaan arag” buu kula cataabay Cali oo indhaha marmaraya, welina aanan si buuxda hurdada uga soo toosin.
Intuusan weli Cali hadlin buu inta is gartay xera-taraarkiisa yiri “adeer raali noqo waan kusoo jafay, laakiin ma anigaa waalan, mise qofkaan guriga dhex fadhisa waa Muno?”.
Adeer Cali oo hurdaysan baa markuu magaca Muno maqlay inta si xayi ah usoo fadhiistay yiri
“Muno waaye adeer macaane”.
“Yaah?” buu Yuusuf la dhawaaqay isagoo u eg in uu hadeer uun xaqiiqsaday in qofku Muno yahay. Adeer Cali wuu dareemay in Yuusuf uu qalqalsanyahay. Isagoon hadal kale ku dhibin buu yiri “adeer macaane meeshaada iisii fadhi intaan suuliga kasoo baxayo”. Cali ma doonayo in Yuusuf uu Muno kaligiis u tago. In uu inta ula tago labadooda dhex dhexaadiyo buu rabaa.
Muno iyadaa awal Cali soo wacday iyadoo ka shakisan in Yuusuf uu qaabili waayo. Cali isagaa Muno guriga keenay, oo Yuusuf la sugayay. Hurdaa la tagtay maahane, wuu sugi weysanaa inta Yuusuf uu ka imaanayo. Wuxuu is lahaa wadnuhuu kula carari doonaa, oo Yuusuf baa isku dhex yaaci doona marnaba kuma fekerin.
Cali inta qubays boobsiis ah isku soo dhuftay buu Yuusuf qolkii ugu soo laabtay. Wuxuu Yuusuf ka codsaday in uu is dejiyo, kana balanqaaday in uu wax kasta si sahlan ugu sharixi doono. Yuusuf isagu afkiisa ma furayo. Madaxa buu aqbalaad la luxayaa kaliya.
Qolkii fadhiga bay isla galeen, oo kursiga ay Muno fadhiso kan kasoo horjeeda labadoodu fadhiisteen.
Yuusuf inta sheekadu socoto, uu Cali arinta kala dhigdhigayo afkiisa ma furayo. Labaduba waxay u haystaan in uu dhagaysanayo, laakiin Sheekadii ugu danbaysay oo isaga iyo Muno ay yeeshaan buu xusuusteedii galay. Sidii ay “guur” afka ula kuusaysay baa madaxiisa ka go’i la’. Habeenkii isugu danbaysay wixii dhex maray, iyo sida dareenkiisii uu ahaa ood moodid in ay cajal ugu duubnaayeen baa u daaran.
“Haye Yuusuf, taas maxaad ka qabtaa?” buu Adeer Cali weydiiyay. Yuusuf waxa laga hadlay war uma hayo, in uu iska camiro buu damcay, oo “waa beelo” iska yiraahdo, hadana inta is celiyay buu yiri
“idinma maqlayne iigu soo celiya adinkoo raali ah”.
“Dhib malahan adeer, waxaan ku niri ka waran hadaad Muno iyo adiga aad balantaan, ood kaligiin sidii dad waa weyn sheekadiina u dhamaysataan?”.
Yaabka taagan, Yuusuf qofka hor fadhisa ee Malaysiya la joogta in ay Muno tahay buu ka shakisanyahay, adeerkiisna in uu la sheekaysto, oo la balamo buu rabaa.
Wax yar buu aamusnaa, kadibna codsaday in la siiyo waqti uu uga soo fekero maadaama arinta dhan ay kedis ku noqotay. Munana waa aqbashay oo sheegtay in ay ku faraxsantahay in uu waqti intuu doonto uu qaato, xilli kastana ay diyaar u tahay in ay is arkaan. Taleefankeeda Malaysiya bay siisay oo albaabka ka degtay.
Yuusuf intuusan adeerkiis hadal bilaabin buu inta istaagay qolkiisii iska galay. Caawa wax aqriskii u qorshaysnaa daaqadda buu ka baxay, oo hurdo markii danbe calwosaad u badatay, toban jeerna uu kasoo kacay buu iska galay.
Adeer Cali in Yuusuf uu faraxsanyahay wuxuu ku yaqaan heesaha uu midba mar luuqda macaan ku qaadayo. Yuusuf oo ukun iyo rooti ku quraacanaya, adeer Calina qayb u dhigay baa jikada miiskeeda qadada fadhiya. Sidii in uusan ahayn qofkii shalay galab qur’aan saarka u baahnaa buu wajigiisu ifayaa, oo jaamacaddiisa isugu diyaarinayaa. Adeer Cali oo ku faraxsan is bedelka Yuusuf ka muuqda baa usoo galay, oo intuu la quraacanayay arintii shalay wax ka weydiiyay.
“Sabtida baan isla soo cashaynaynaa” buu Yuusuf si filanwaa ah adeerkiis ugu sheegyay.
“Oo waadba balanteen?” buu adeer Cali si niyad jab yari ka muuqdo u yiri, oo hadana inta ka baqay in Yuusuf uu ka xumaado daba dhigay
“masha Allah waan ku faraxsanahay. kheyr Allaha ka dhigo”.
Saaka hurdo uusan si fiican uga bogan, oo waagu intuu ka baryayo lala sugayay kaliya buu kasoo toosay.
Madaxiisa Munaa dhex rafanaysa. Wuxuu is weydiinayaa sababta markii horeba labadooda oo heshiis ka dhexeeyo, dhib weyna isla soo maray ay u inkirtay. Wuxuu is weydiiyay sababta ay Malaysiya u timid, una soo raadisay. Wuxuu isku qanciyay in ay ugu yaraan jawaab su’aalahaan uga hayso, mudantahayna in ay kulmaan, oo waxa madaxeeda ka dhex guuxaya ay banaanka soo dhigto.
Wuxuu arinteeda qaadaa dhigaba, markii danbe wuxuu goostay in uu waco, oo waxay ku andacooto uu arko.
Nasiib wanaag markuu soo wacay Muno waa soo jeeday. Salaadda ka dib dabeecad uma laha in ay hurdada ku laabato. Markii ay codka soowacaya aqootay bay farxadi haraysay. Sida dareenkeedu ahaase, hadal farxadi ka muuqato Yuusuf kalama hortagin, oo ma garanayso waxa uu u soo wacay. Iyadoo degan bay hadalkii Yuusuf ka gurtay, oo markuu Sabtida balamiyay farxad darteed inta taleefankii gacan saartay, oo barkin afka saaratay qeylo ku dhufatay.
“Haye Yuusuf waa inoo Sabtida” bay cod degan ku tiri iyadoo sugi weysan inta ay taleefanka ka dhigayso si ay si fasaxan ugu dabaal degto.
Waa Sabti, kow iyo toban saac iyo bar. Yuusuf maanta wax aqris iyo wareeg kale kuma mashquuline inta gabalku ka dhacayo buu sugayay. Waa kaligiis. Hees macaan baa rikoor laba sameecadle ah uga daaran. Waa mar uu heesta la qaadayo iyo mar uu heesta laxankeeda ku fooryayo.
Surwaal jiinis qaxwi ah, funaanad madow oo illaa iyo qoorta daboolaysa, jaakad nuuca garabaatiga lagu xirto ah oo iyana qaxwi ifaya ah, kabo maqaar ah oo madow oo taako yar oo been ah leh buu isku taagay, oo muraayad darbiga fadhiga iyo kushiinka u dhaxeeya ku dhagan buu hor taagan yahay. Sida uu isku sax saxayo, oo isku tirtirayo wuxuu soo xasuustay galbihii uu Xamar Jadiid Muno ugu tagi jiray.
“Tolow waxa oday jactada oo islaan uu sodon sano qabay daba taagan, soo waagii uu shukaansanayay isma labisi jirin! Tolow waa maxay sababta dadku ay isku dhigtaan, oo dadaalka badan u yareeyaan markii ay helaan qofkii ay rabeen?” Buu kaligiis is arkay isagoo is weydiinaya. “Wallaahi hadaan guursado in aanan waligay xaaskayga meel u raacayn anigoon aad u labisnayn” buu iska balan qaaday isagoo shanlada isku celcelinaya, oo hadba tin qaldan ay u muuqanayso.
“Sodon sano kadib haba la gaaree, soo marka hore in caruurta hooyadood lasoo helo maahan?” buu kaligiis isagoo qoslaya iskula yaabay. Sidii nin shan daqiiqo ka hor kafee cabay bay farxad yari wada saaqday, oo cod in banaanka laga maqlo uu ka baqay ugu heesay heesta Cajabay Cajiibeey oo markaas u daarnayd.
Maqribkii markuu tukaday buu tagsi uu ku dhacay toos u geeyay maqaayad magaalada bartankeeda ku taalla uu Muno kula balamay.
“Mudane soo dhawoow” buu kabalyeeri Hindi ihi ingiriisi ku yiri. Intuusan Yuusuf jawaabin buu hadana raaciyay “miis miyaa kuu carbuunan mise mid baan hadeer kuu raadiyaa?”.
Yuusuf oo weli la qabsan la’ dadka wadankaan ka shaqeeya edebtooda iyo xushmadooda baa u sheegay in miis uu u carbuunanyahay, magaciisana dhiibay. kabalyeerigii markiiba inta Yuusuf la booday buu miis laba qofood loogu talo galay, oo maqaaxida meel gees ah kaga yaalla fadhiisiyay.
Miiska labada qof oo fadhisa waxaa barbarkooda ah webi. Webiga waxaa ka shisheeya dabaqyo dhadheer, oo leeyrarka ka baxaya ay inta biyaha webiga qabtaan cariga dhan wada ifinayaan.
Yuusuf oo quruxda jawiga ku ildoogsanaya baa ilyarada ka arkay qof soo liicaya, uusoo jeestayba waa Muno oo markuu isha saaray hadalkii ku dhajisay.
Muno nasiino iyo raynrayn baa ka muuqata. Sidii Xamar markii ay joogtay jalbaab ma xirnee garbasaar yar, oo sidii in ay labiska Yuusuf u ekeynayso qaxwi ah, baa madaxa ugu duuban kaliya. Jaakad cadays ah oo si fiican u le’eg, dhexdeeda dhuubnideedana soo saartay, dhirirkeeduna qaarkeeda danbe daboolayo, jiinyeerna aan lahayne xarig la iskula qabto kaliya leh bay xirantahay. Hoos waxay ka sidataa saako barabaro madow iyo cadaan isku jira leh oo sifiican u dhirir iyo balac le’eg oo anqawga korkiisa ugu joogta.
Kaba cirib dheer leh, oo maqaar qaxwiya ah, oo cagaheeda marka laga reebo faraha hore iyo meesha shanshada iyo cagtu iska gasho daboolay bay ku taagantahay. Umaddii maqaayadda sida ilbaxnimada leh ugu cawaynaysay qoortoodii waa wada jeedisay.
Sidii dadkii iyagoo dharka xayeeysiinaya talefishinada laga daawan jiray, bay socod liicis ah si xaraga leh u dhinacyaynaysaa. “Kabahaas dhaadheer sida loogu socdo yaa baray qofkaan jinnigaa?” buu Yuusuf si malaysanwaa ah isku weydiiyay. “Wallaahi waxaan ku jeclaadaa meesha taalla” buu hadana sii raaciyay isagoo markaan inta istaagay kursigii ay ku fadhiisan lahayd usoo dhawaynaya. Inta labada dhaban salaan uga dhunkaday buu in ay fadhiisato u seenyaaleeyay.
In ay Muno hadasho maahane Yuusuf waayahaan hadal kama soo dhawa. Muno quruxdeeda markuu maalma ka maqnaadaba isku si bay u saamaysaa. Xaaladdu illaa ay ka degto, wuxuu u dhaxeeyaa aamusnaan iyo tartarid.
Muno markaan oo kale iyadaa sheekada bilaabi jirtay, laakiin maanta teedaa haysata. Yuusuf waxay u sheegi lahayd bay madaxeeda isaga duwanaysaa. Kabalyeerigii miiskooda ku qornaa baa u yimid oo u keenay kaararkii ay cashada ka dalbanlahaayeen, iyaguna waxay u sheegeen in ay u yeeri doonaan markay diyaar noqdaan.
“Adigaa dhanka cuntada ku fiicane wax noo dalab abaayo”
“Haddii ay baasto iyo bariis tahay waan ku fiicanahay laakiin meeshaan waxa ku qoran waxba kama aqaan Yuusufoow”.
“Haye, waan isla fiirinaynaa” buu Yuusuf xal ku gaaray.
Waxay cabaar kaarkii rogrogaan bay markii danbe iyagoo qoslaya, oo la yaaban maskaxda iyo xiniinyaha bisil ee la iibinayo dalbadeen wax ay fahmi karaan, macaanna ula muuqda.
Cashada kadib, waxay Muno hadal ka warwareegsataba markii qaxwadii loo keenay bay arintii ay Yuusuf ugu yeertay guda gashay.
“Yuusuf aboowe, aad baan ugu faraxsanahay in aan caawa inagoo cidi na arbusheen is hor fadhino. Kaaga sheekayn maayo oo aniga iyo adiga taariikhdeenna waad ka dheregsantahay. Aabahay oo sida uu u xanaaqsanyahay aanan waligay arkin waa tuu Taleex iga soo waday. Guriga markuu ikeenayna waad maqashay in uu bandow i galiyay. Xal wuxuu u arkay in nin uu isagu wato, oo wiil miskiin ah, oo deriskeenna ah uu isiiyo. Isagoon adiga ku aqoon buu ciyaal suuq in aad tahay kaa aaminay, nin aanan waxba baranoo liin boloshay iibshana damcay in uu noloshayda dhan farta ka saaro. Aabahay waan jeclahay, laakiin nolosheyda kama aqrisanayo in uu maamulo, illeen waa aniga qofka ay noolaanshaha ka rabtee”.
Yuusuf hadalku meesha uu u socdo wuu u bogayaa, laakiin weli arinkii “guur”, iyo wixii ay habeenkaas ku hadlaysay meesha ay u dhigi doonto buu ka war dhowrayaa.
“Markaan arkay sida ay arini u cakirantahay, baan aabahay u sheegay in aan soo jeedintiisa aqbalay. Laakiin la i sugo inta aan waxbarashada ka dhamaysanayo aabana wuu iga aqbalay. Si aan dantayda u gaaro aboowe, waan ku qasbanaaday in aan balan been ah qaado. Sidaad la socotay waxaan rabay in aan noqdo dhaqtarka caruurta, markaan maqlay in aad malaysiya soo aadaysid baan anna isla Malaysiya jaamacadaydii ka dalbaday. Nasiib wanaag markiiba waa i aqbaleen. Habeenkii aan tukaanka isku arkaynay, iyo beegarkii aan kala goosannay, iyo cabitaankii aan isku hanbaynay aniga waxay ii ahayd macsalaamayn aan kaa daba imaan doono”.
Hadalkaan inta ay sheegayso Muno indhaheeda waxaa ka dhaldhalaalaya illin u eg in ay mar dhaw soo dareeri doonto. Iyadoo sii wadata bay tiri
“La joogistaada habeenkaas aad baan ugu raaxaysanaayay. Hadaad xasuusatid Barre markuu nasoo eegay waataan kuu sheegay in wiil Dubaay jira aan guur ku heshiinay. Anigoo og in Barre uu adna ku taageersanyahay anna waxa aan rabo uu ii yeelayo, baan hadana hadalkaas u maqashiiyay si haddii aabe uu weydiiyo uu ugu sheego in aan Mukhtaar guurkiisa aqbalay”.
Yuusuf hadalkeeda sida uu u dhacayo wuu dareensanyahay hadeer. In ay Mukhtaar guurkiisa been aqbashayna wuu gartay, laakiin wuxuu weli la yaabanyahay sababta ay isaga u xanuujisay, ooysan xilli hore ugu dhimrin.
Iyadoo weli hadalkeedii uusan kala go’in bay tiri
“Habeenkaas markaan guriga tagay oohintii aan galay barkintii iyo wajigaygii waa isku dhageen, sababtoo ah waan dareemayay xanuunka aan kuu gaystay, hadana hadaanan sidaas yeelin in aan caawa is hor fadhino ma suuro gasheen. Sida aan kuu jeclahay hadaad ogaan laha…”
Markaan oohin maqaaxidii laga wada maqlay bay la fiqfiqlaysay inta is celin weysay. Yuusuf inta halhaleel usoo istaagay, oo dhankeedii jilba jabsaday isagoo safaleetigiisii ilinta uga tirtiraya, una sheegaya in ay wax walba hagaagi doonaan buu aamusiyay.
Runtu waxay tahay Muno iyo Yuusuf waa dadaaleen. Si kasta ooy yeeleen, iyo meel kasta ooy ku dhuunteenna awoodooda arin ka wayn baa ku dhacday, oo markii danbe qasab baa lagu soo kala kaxeeyay. Iyadu waxay xal u aragtay in ay Yuusuf inkirto taas oo u meel martay, keentayna in Mukhtaar loo aaminay iyadoon laga shakisanayna Malaysiya loogu soo diray.
“Haye aboowe, ma i cafisay?” bay tiri Muno iyadoo weli oohinteedii wadata, faruurteeda hoosena ay sidii in uu qabow darani hayo la gariirayso.
“Haa bisinkee!” buu ku jawaabay isagoo markaan is ceebsanaya, aadna mooddo in uu Muno xanuunkeedii dareemayo.
Isagoo iyada sasabaya buu yiri:-
“Macaanto iga raali noqo, waan ku xumeeyay. Waan dareemi karaa in aysan wax sahlan ahayn in aad qofkii aad jeclayd inkirtid isagoo ku ag fadhiya. Haddii aysan adiga geesinimadaada iyo garashadaada ahayna caawa dhabtii isma hor fadhinneen. Mar labaad mahadsanid”.
Maqaaxidii oo aad u camiran, dadkuse sida ay u buuxaan aysan u buuq badnayn bay labadoodu is hor fadhiyaan iyagoo farxad lawada ilmaynaya. Waxay hadeer uun ka welweleen in dadku la yaabeen, oo shanqar yaridii maqaaxida qaseen. Yuusuf oo ciddii eegaysa iyo cid kale aanan kala jeclayn baa hadalkii qaatay oo yiri:-
“Waan ku jeclahay macaanto!”
“Inta aad i jeceshahay tobankeed anigaa ku jecel” bay ugu jawaabtay, oo inta markeeda soo istaagtay illin daankiisa ku tiilay gacanteeda uga tirtay.
Wax yar ka dibba waa iloobeen dhibkii iyo is-fahanwaagii ku dhex jiray, oo bilaabeen in ay ka sheekaystaan noloshii xiisaha lahayd ooy isla soo qaateen. Cabaar markii ay Ree Xiirane isla xanteen, bay ku ballameen in ay berri oo dhan magaalada isla soo wareegaan, oo Yuusuf inta uu Muno dhaamo magaalada soo kala baro.
Yuusuf wuxuu saaka hurdo kasoo kacay gurigii oo quraac caraf badani ay hawadiisa ku wada saaqantahay. “Adeer Cali cunto saan u macaan ma karin yaqaane yaa yimid?” buu uurka iska yiri oo durbaba inta suuliga aaday qubays isku soo dhuftay. Isagoo macawuus iyo funaanad cusuboo cad xiran buu kushiinkii aaday.
Miiska kushiinka waxaa ku sharaxan quraac- ukun, beer iyo rooti ka kooban. Liin bambeelmo miiran, oo garaafo ku jirta buu baraf ka dhex dhalaalayaa. Muno oo daaqadda kushiinka cadceed kasoo gashay ay dhabankeeda dhalaalinayso baa kursi ku tiirsan. Adeer Cali baa koobab shaah lagu cabi lahaa biya raacinaya.
Markay u jeedeen Yuusuf oo usoo galay bay sidii in ay u kala hormarayaan isla yiraahdeen “subax wanaagsan!” hadana qosol labadooduba ku dhufteen. Yuusuf oo dhag illaa dhagta kale dhoolla cadaynaya baa ku jawaabay “wanaagsan oo wacan, gacal iyo xigaaloow”.
Iyagoo reer weyn oo faraxsan ah bay wada fadhiisteen, oo isla quraacdeen. Adeer Cali oo markii quraacdii la bogay sii dhuumanaya, oo is leh labadooda nabad geli bay ku qasbeen in uu raaco, oo magaalada lasoo wareego isna isagoo ka caga jiidaya buu ka aqbalay.
Yuusuf iyo Muno labada sano oo xigtay, inta laba guri oo isku dhaw soo dageen bay wada cunteynayeen, wax wada aqrisanayeen, wada dhafrayeen, wada afurayeen oo wada ciidayeen. Jacaylkoodii wuu xididaystay, oo sii weynaaday. Waxay gaareen heer ay daqiiqad yar xataa kala maqnaan waayaan.
Yuusuf iyo Muno jaamacaddii hal sano kaliya baa uga harsan. Mar dhaw Soomaaliya bay ku laaban doonaan.
Waa rabi lahaayeen in ay is mehersadaan hadeer, si ay sanadka haray iyagoo is qaba u wada qaataan, waalidkana aysan hadhow dhib u gala kulmin markay laabtaan. Labadoodu waxay ku riyoonayaan in iyagoo is qaba, oo garbaha isku haya ay isla qalin jabiyaan.
Muno baase weli aabaheed ka baqaysa. Adeer Cali baa soo jeediyay in uu walaalkiis wacayo, una sheegayo Yuusuf in gabadhaas loo doono. Yuusuf taladaas waa u riyaaqay, Munana “wixii ka dhacaya haka dhacaan” bay inta tiri soo jeedisay in Yuusuf aabihiis iyo Barre la is baro marka hore si Barre uu u caawiyo.
Warfaa Cumar markii walaalkiis Cali uu usbuucii hore usheegay in Yuusuf gabar loo doono wixii ka danbeeyay, wuxuu ku mashquulsanaa raadinta dad garanaya Ree Jaamac Sandhool. Maadaama Cali uu uga sheekeeyay taariikhdii Yuusuf iyo Muno soo dhex martay, iyo in Muno ay wiil kale weli u doonantahay buu goostay in isagoo diyaarsan uu Jaamac Sandhool la xiriiro, si ay u adkaato in gabadha loo diido.
Barre oo ay is barteen Yuusuf aabihiis Warfaa Cumar, baa ugu bishaareeyay in aabihiis uusoo dhawaynayo Ree Warfaa, gabar la diidayana aysan jirin.
Subax Jimce ah buu Warfaa wacay Jaamac Sandhool. Intuusan gabadhii weydiisan buu Jaamac Sandhool lasoo booday:-
“Yuusufka na wareeriyay Barfasoor Warfaayoow ma adigaa dhalay?”. Intuusan Warfaa jawaabin buu Jaamac Sandhool Warfaa iyo odayaashiisaba ku casuumay gurigiisa, una sheegay in uu ku faraxsanyahay in uu isaga yahay qofka gabadhiisa wiilkiis la raba.
Barre baa aabihiis horay ugu sheegay Warfaa qofka uu yahay, iyo ujeedada uu usoo wici doono. Jaamacna labadaan sano oo Muno ay Malaysiya ku maqnayd buu si qotodheer uga sii fekeray, kana qoomameeyay in uu gabadhiisa nin aysan rabin uu siin rabay. Hadana markuu ogaaday in Barfasoor warfaa oo magaaladoo dhan laga jecelyahay uu yahay qofka wiilkiisu Muno rabo, buu farxad meel uu is geeyo garan waayay.
Wallee saakay iyo subixii Ree Cabdi Xiirane la sugayay guriga Ree Jaamac Sandhool kala farxad iyo saxmad badan. Sidii dad sab qaba bay xitaa derisku caawinayaan, oo reerka guriga la diyaarinayaan. Warfaa iyo odayaashiisu markii ay yimaadeenba waxaa loo gudbiyay qolka fadhiga, oo carafta kasoo baxaysa weligaa haka tegin ay ku qabanayso.
Kaftan, qosol iyo sheeko kadib si farxad leh baa Yuusuf jacaylkiisii loo siiyay, oo loogu mehriyay. Yuusuf iyo Muno oo qadka ku jiray baa markuu meherkii dhacay, iyagoo illini ka qubanayso isku hambalyeeyay. Adeer Cali oo isaga laftiisu illini ka socoto baa labadoodaba u hambalyeeyay, oo isagoo la kaftamaya yiri:-
“Dad waa weyn baa tihiine joojiya boohinta”.
“Adna jooji adeer” bay Muno oo qosol iyo oohin isku daraysa tiri.
“Wallee adeerkay waa la igu qabsaday” buu Yuusuf Muno kula kaftamay isagoo farxad kala garan la’ in uu dhulka fadhiyo iyo in uu duulayo.
“Dheelmasho iyo sii hoyaadid baaba nafta iga qaadaye, wallee caawa halkaan baan seexanayaa” bay Muno si farxad iyo reyreyn leh u tiri.
Yuusuf iyo Muno waxay go’aan ku gaareen in ay isla soo dagaan. Markii ay jaamacaddu u dhamaato, oo ay Soomaaliya ku laabtaanna ay Xamar ku aqal galaan haddii Alle idmo.
“Wallaahi gabdhahaan iyagoon waxbarashada dhamaysan, iska guursanaya baan la yaabay. Qasaaro weynaa” buu Yuusuf oo Muno duraya, ogna in ay gabdhaha nuucaas ah la yaabi jirtay yiri.
“Alla Rabiyoow, anna ma kuwaas baan noqday?” bay Muno tiri iyadoo afka gacanta yaab la saartay.
“Nabsi waa ma guuraan!” buu Yuusuf ku heesay, isagoo Munoo cayrsanaysa fadhiga kula war wareegaya.
LA SOCO QEYBTA 33AAD
Dhageyso: Xildhibaan Odawaa oo ka hadlay khilaafka DFS iyo Dowlad goboleedyada
Wasaaradda Arimaha Gudaha DFS oo ka hadashay khilaafka Galmudug
Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo Madaxtooyada lagu soo dhaweeyey
Ra’iisul Wasaare Kheyre Oo Kulan La Qaatay Boqorka Sacuudiga (Dhageyso)